Matanho manomwe ekugadzira Killer Kushambadzira Vhidhiyo Martech Zone
Matanho manomwe ekugadzira Killer Yekushambadzira Vhidhiyo
Muvhuro, Mbudzi 20, 2017 Douglas Karr
Tiri kukwirisa iyo vhidhiyo yehupenyu kune mumwe wevatengi vedu panguva ino. Vane toni yevashanyi vanouya kune yavo saiti, asi isu hatisi kuona vanhu vanonamira kwakanyanya kureba. Mutsananguri mupfupi chichava chishandiso chakanakisa chekutora kuti vawane kukosha kwavo uye kusiyanisa kune vashanyi vatsva nenzira inonakidza.
Zvidzidzo zvinoratidza kuti mutengi kudiwa kwevhidhiyo zvemukati zvawedzera zvakanyanya, ne 43% inoda kuona mamwe mavhidhiyo kubva kuvashambadzi. Mavhidhiyo uye zvemukati mehupenyu zvakave zvakakosha mukushandurwa, ne51.9% yevatengesi vanoti vhidhiyo ine yakanakisa ROI kana ichienzaniswa nedzimwe mhando dzezviri mukati. Muchokwadi, mapeji anomhara ane mavhidhiyo anotungamira ku 800% kumwe kutendeuka. MicroCreatives
MicroCreatives, izere-sevhisi-kumahombekombe ekugadzira dhizaini agency, yakaburitsa ino inonzwisisika infographic - Nzira 7 dzekugadzira Killer Yekushambadzira Vhidhiyo - izvo zvinofanirwa kubatsira chero kambani kana yekugadzira kukamba yavo yekutanga vhidhiyo chirongwa. Iyo infographic inofamba iwe kuburikidza nematanho anodikanwa ekuvandudza yako inotevera vhidhiyo chirongwa.
Heano matanho manomwe ekugadzira Killer Yekushambadzira Vhidhiyo
Sarudza vhidhiyo yako zvinangwa uye chinangwa chevateereri
Sarudza kurudyi mhando yevhidhiyo gutsikana Nechinangwa chako
Ipakati iyo kutenderedza a brand brand
Usaiti kuva anofinha
Sarudza pamusoro pekuisa Vhidhiyo yako
Pima uye ongorora mutambo
Ini ndinonyatso kukoshesa kuti vakatanga neine chinangwa mupfungwa uye vakapera nekuyera iko kuita kwesimba!
Tags: sei kutikushambadzira vhidhiyoKushambadzira VhidhiyomicrocreativespemvuraphilipinesmatanhoYouTube
Usatarisira pasi Kukanganisa kweBrick uye Mortar Chitoro